Leggi Washiya Umsebenzi Waqala Ibhizinisi online
UTHANDO lokuba wusomabhizinisi lwamphoqa ukuba ashiye umsebenzi ayewufundele, ngokusho kukaMnuz Delani Makhaye (37). UMakhaye ngumphathi weMaccaya Communications neMontano Contracting and Trading, eyakha imigwaqo nezakhiwo iphinde ihlanze izindawo.
Uphinde abe yinhloko kwiProgressive Youth in Business,
Altro da Isolezwe nGesonto Sunday
Isolezwe nGesonto Sunday1 min letti
Ubuye Ngesivinini UDJ Wodumo
UBUYE ngesivinini uDJ wodumo endimeni yezokungcebeleka njengoba esemalungiselweni okukhipha i-EP yakhe maduze. UDumile Kunene, odume ngelikaDJ Dumile ezindaweni zobumnandi, ubeseqalile ukubonakala enandisa ebumnandini ngezimpelasonto ngaphambi kokuth
Isinqumo Ngemenenja KaMasipala YeTheku
SIZOPHUMA ngoLwesithathu isinqumo senkantolo ngesicelo seMenenja kaMasipala weTheku, uMnuz Sipho Nzuza, sokubuyiselwa emsebenzini. UNzuza ungaphandle ngebheyili kaR50 000 ecaleni lenkohlakalo emaqondana nethenda yokuqoqa udoti eThekwini. UNzuza w
Zwelakhe Ngcobo 031 308 2764 031 308 2752 Sizwe Blose 031 308 2760 Khetha Sangweni 031 308 2739 Nqobile Masimula 031 308 2748 Thokozani Ndlovu 031 308 2758 Nhlanhla Sithole 031 308 2786 Malibongwe Mdletshe 031 308 2784 031 308 2741 Isolezwe ngeSonto
Summary: The Seven-Day Weekend: Review and Analysis of Semler's Book
Autore Steve Knox